ny fisafoana izay tsy miato andro sy alina amin’iny faritra iny no nahafahana nisambotra ireto mpanendaka ireto. Ny sabotsy 24 aogositra tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro dia tovolahy 15 taona no lasibatry ny mpangarom-paosy teny ambodin’Isotry, finday 1 izay tao am-paosiny no nosokirina lehilahy iray tamin’io fotoana io. Henony anefa izany ka niantso vonjy izy. Vaky nandositra ilay olon-dratsy saingy voasambotry ny polisy tsy lavitra teo.
Lehilahy 29 taona kosa no tratra teo am-panendahana lehilahy teo Ambodin’Isotry ny alahady tamin’ny 4 ora tolakandro. Narahiny avy ao aoriana ilay lehilahy ary teo am-pisokirana ny vola tao am-paosiny izy no nisy nahita ary voasambotry ny fokonolona. Natolotra ny polisy izay nandalo nanao fisafoana tsy lavitra teo izy. Niaiky ny helony izy nandritra ny fanadihadiana azy.